Fotoana izao hamandrihana ny tranonao ao amin'ny G-11, G-11. Manofa trano ity izao alohan'ny tsy hahitanao ny vintana! Ao amin'ny G-11, afaka mankafy tombony be amin'ny toerana misy anao ianao. Ny trano dia mandrakotra faritra 5 Marla izay habe mety tsara ho an'ny fianakaviana rehetra. Raha tena mitady trano amin'ny teti-bola ao anatin'ny 25000 Rs ianao dia zahao ity iray ity. Raiso aminay izany fa tsy isan'andro dia miseho ny trano toa izao amin'ny radarantsika. Koa manentana anao mafy izahay mba tsy hamela ity tolotra ity. Raha mitady fampahalalana bebe kokoa ianao dia aza misalasala mifandray.